जागिर चाइयो ? हामी दिन्छौं जागिर; ३० देखि ३५ हजार तलब – Khabar PatrikaNp
September 6, 2020 1611
Prevआईतबारको सुरुवात सूर्य देवको आराधनाले गर्नुस, हुनेछ लाभ..!
Nextएउटै कोरोना रिपोर्ट कतै पोजेटिभ कतै नेगेटिभ !
छिनछिनमै बिजुली जाने ट्रिपिङ को समस्या घट्दै
तेह्रथुम (१३ थुम ) जिल्लाको नामाकारण कसरी भयो …? पुरा पढ्नुहोस
अन्तत अनिशाले धुरुधुरु रुदै भनिन – ‘म कन्चनलाई अझै पनि माया गर्छु’ (पुरा भिडियो हेर्नुहोस) (32697)